Vaovao - Inona no vokatry ny toetrandro amintsika?
Ny fiantraikan'ny toetrandro dia mizara ho sokajy folo manaraka ireto:
1. Eo ambanin'ny toetr'andro tafahoatra toy ny rivo-doza sy ny tsunami, ny olona dia tsy afaka mivezivezy ary manimba ny famokarana sy ny fiainana aza;
2. Mandritra ny haintany sy ny tondra-drano dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny famokarana fambolena, izay fototry ny fiainana ara-tsosialy;
3.Ny fiovan'ny toetr'andro mahazatra aza dia mety hisy fiantraikany amin'ny drafitra nataonao anio, ary mety tsy hivoaka ianao noho io antony io, sns.;
4.Raha mihamafy ny vokatry ny trano fonenana dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny fambolena izany ary hisy vokany amin'ny andiana fiainana toy ny indostria;
5.Ny fiovana lehibe indrindra amin'ny toetr'andro dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalamanao;
6.Ny zavona mavesatra dia misy fiantraikany amin'ny fifamoivoizana;
7.Indray andro iainana dia hanao diabe, misy fiantraikany amin'ny làlan'ny fitaovam-piadiana sy ny làlana hafa;
8.Weather manimba ny dia ihany koa;
9. Ny orana sy ny tondra-drano dia vokatry ny toetr'andro ratsy avokoa. Mihena ny famokarana fambolena, voasasa ny arabe ary tsy maninona ny mivoaka. . .
10.Ny coal dia hamokatra CO2 be dia be (carbon dioxide) dia singa iray lehibe izay misy fiatraikany lehibe amin'ny fiakaran'ny toetrandro!
Noho izany, hisy fiantraikany amin'ny indostria toy ny solika solika, famokarana herinaratra ary herinaratra mafana koa ny toetr'andro ratsy!
Ny toe-piainan'ny toetr'andro dia singa iray lehibe amin'ny tontolo iainan'olombelona. Ny toetoetran'ny toetr'andro sy ny fiovan'ny toetrany dia tsy hoe misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ara-batana fotsiny, fa misy vokany miharihary amin'ny lafiny ara-tsaina sy ara-pihetseham-po an'ny olona. Ny toetry ny toetrandro mety dia mampitombo ny toe-po, ny toe-po, ny kalitaon'ny fiainana ary ny fahombiazan'ny asa ny olona; Ny toetr'andro tsy mahasoa dia mety hahatonga ny olona hahatsiaro ho kivy, sempotra, kamo, ary mety hiteraka aretina ara-tsaina sy fihetsika tsy mahazatra aza.
Asehon'ny fikarohana fa ny hafanana avo, ny hamandoana avo, ny orana ary ny toetr'andro tsy mahazatra izay tsy mahasalama ny sain'ny olona. Raha ny angona azo avy tamin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana, ny "El Niño" tamin'ny 1982 ka hatramin'ny 1983 dia nahatonga olona 100000 manerantany nihena ny fahaketrahana, nitombo 8% ny trangan'ny aretin-tsaina ary nitombo 5000 ny isan'ny lozam-pifamoivoizana. . Ny antony dia ny "El Niño" ity karazana fanovana toetr'andro tsy ara-potoana ity dia niteraka tsy fetezan'ny toetr'andro sy ny voina amin'ny toetr'andro, izay nihoatra ny fiaretana ara-psikolojika ataon'ny olona sasany, ka nahatonga ny tsy fitaintainana, ny fahaketrahana ara-tsaina sns. Ary ny olona malemy saina ihany koa mandefa tomany Hysterical.
Amin'ny ankapobeny, ny tontolo iainana mari-pana ambany dia mahasoa amin'ny famoronana fanjakana ara-tsaina tsara kokoa, raha avo ny mari-pana na rehefa miakatra ny mari-pana dia mora miovaova sy tsy fahita ny toetran'ny olombelona. Hitan'ny manam-pahaizana momba ny saina fa rehefa avo ny mari-pana na misy fidirana an-tsehatra mafana ankehitriny, dia mifoha sy mirenireny ireo marary saina, tsy mahita tory, mikiakiaka, manozona ary midaroka zavatra mihabe, ary ny olon-tsotra koa dia hanana fiovana ara-pihetseham-po isan-karazany. . Satria ny hafanana ambony dia tsy tsara amin'ny fahasalaman'ny sain'ny olona, ​​dia avo dia avo ny tahan'ny heloka bevava amin'ny tontolon'ny maripana ambony. Tamin'ny 1996, talohan'ny Lalao Olaimpika, ny polisy amerikana dia nanendry manam-pahaizana hanao fanadihadiana amin'ny antsipirihany ary nahita fa nitombo ny isan'ny tranga isan-karazany nahavanona heloka bevava isan'andro tany Atlanta niaraka tamin'ny fiakaran'ny maripana. Mihabetsaka hatrany, ny volana Jona sy Jolay, ireo volana mafana indrindra, no manana taha ambony indrindra amin'ny asan-jiolahy. Ny Lalao Olaimpika dia tanterahina mandritra io vanim-potoana io. Mba hanalefahana ny tahotry ny olona dia nandainga ny filohan'ny komity mpikarakara olympika fa tsy mihoatra ny 30 ° C ny hafanan'ny fahavaratra any Atlanta.
Ilay fitenenana taloha hoe "Ny lanitra manjombona sy mahaketraka." Midika izany fa amin'ny fotoanan'ny orana dia kamo ny fanahin'ny olona ary tsy mora ny toe-pony. Ny meteorologists ara-pitsaboana eto amin'ny fireneko dia nahita tamin'ny alalàn'ny fikarohana lalina fa ny antony lehibe mahatonga ny toetr'andro orana hisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny sain'ny olona dia satria ny hazavana malemy amin'ny toetr'andro orana ary ny vatana dia manafina hormonina pineal bebe kokoa. Amin'izany fomba izany, ny fihenan'ny tsiranoka amin'ny tirroxine sy adrenaline dia somary ambany kokoa, ny sela nerveux n'olombelona dia "kamo", lasa "malaindaina", ary ho lasa tsy misy dikany ny olona.
Ny fiantraikan'ny toe-javatra meteorolojika amin'ny fahasalaman'ny saina dia nahasarika ny sain'ny psikology, ny behista ary ny mpahay siansa fitantanana. Rehefa mamoaka ny vinavinan'ny toetr'andro, ny firenena sasany dia mamoaka ihany koa ireo aretina ara-batana sy ara-tsaina mety hateraky ny toetr'andro amin'ny ho avy, ary koa ny sosokevitra momba ny fepetra fisorohana aretina "namboarina tamin'ny toetr'andro".